पहिलो भेटमा पुरुषहरू बढी ख्याल दिन्छन् महिलाका यी अं’गहरूमा – Jagaran Nepal
पहिलो भेटमा पुरुषहरू बढी ख्याल दिन्छन् महिलाका यी अं’गहरूमा
Jagaran Nepal बुधबार, कार्तिक २४, २०७८
पुरुषले पहिलो पटक महिलालाई हेर्दा कस्तो कुरामा विशेष ध्यान दिन्छन् त ?
यो कुरा धेरै महिलाहरुको लागि चासोको विषय बनेको हुन सक्छ ।
जब कुनैपनि युवकको अपरिचित युवतीसँग आँखा जुध्छ । युवकले त्यसपछि नजरले भ्याउन्जेल एकसरो युवतीको सिरदेखि पुच्छार सम्म हेर्छ ।
पहिलो नजरमा जिउका सबै भागमा आँखा पुराउन सक्ने कुरा भएन । आखिर पुरुषले पहिलो नजरमा महिलाका कुन कुन भाग वा विषयमा ध्यान दिन्छ होला ?
मनोविज्ञहरुका अनुसार पुरुषले सुरुमै महिलाका यी ५ कुरामा ख्याल राखेको हुन्छ कपाल पुरुषले महिलाको सरीरमा सुरुमै ख्याल राख्ने एउटा अं’ग हो कपाल । यसको मतलव पुरुषले निकै लामो कपाल मात्र मन पराउँछ भन्ने होइन ।
तर सफा, स्वस्थ तथा आकर्षक कपाल भएकी महिलाले पुरुषलाई आ’कर्षित गर्न सक्छिन् । भनिन्छ युवतीसँग आँखा जुधाइरहँदा युवकले ती युवतीको कपाल सु’म्सुम्याइरहेको कल्पना गरिरहेको हुन्छ । मु’स्कान के तपाइँको मुस्कान आँखा सम्मै पुग्यो ? अ’र्थात् तपाइँले मुखको मुस्कान सँगै आँखाबाट पनि सोही भाव व्यक्त गर्न सक्नुभयो ?
मनोविज्ञहरुका अनुसार पुरुषहरु महिलाको मुस्कान बनावटी हो की साँच्चिकै हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सक्छन् । महिलाको ओठ तथा आँखाको भावको अध्ययन गर्न पुरुषहरु स’क्षम हुन्छन् भनिन्छ बोली पुरुषहरु अलि सुरिलो बोली भएका महिलाहरु प्रति आ’कर्षित हुन्छन् । बोलिको पिच कम भएका वा धोद्रो आवाज भएका महिलाले पुरुषलाई आ’कषिर्त गर्न सक्दिनन् ।
मनोविज्ञ हरुका अनुसार सुरिलो बोली भएका महिलाहरु बढी स्वस्थ हुने वि’श्वास पुरुषमा हुन्छ । कम्मर र ही’पको आकार पुरुषले महिलाको कम्मर र हि’पको आकारमा विशेष ध्यान दिन्छन् । छिनेको कम्मर र चौडा ही’प भएकी महिला पुरुषको रोजाइमा पर्छिन् भनिन्छ।यसले महिलाको प्रज’नन क्षमता उच्च भएको संकेत समेत गर्छ
आँखा वास्तवमा आँखा पहिलो नजर पर्ने अंग नै हो । आँखाको आकार, नशालु पन, नानीको रङ, परेलाको बनावट लगायतका सबै कुराले महिलाको आ’कर्षणमा प्रभाव पार्छ र यो कुरामा पुरुषले विशेष ध्यान दिन्छन् ।